Goormee ayuu Jose Mourinho ogaaday in Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalka Premier League? – Gool FM
(London) 03 Feb 2020. Hoggaamiyaha kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay goortii uu ogaaday in Liverpool ay hanan doonto horyaalka Premier League, 30 sano kaddib.
Kooxda uu macallinka u yahay Jose Mourinho ee Tottenham ayaa qasaaro 2-0 waxa ay gaarsiiyay dhinaca macallin Pep Guardiola, Taasoo Liverpool u horseeday in 22 dhibcood oo nadiif ah horyaalka ku hogaamiyaan.
Macallinkii hore ee kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa rumeysam in Liverpool uu aaminay in ay ku guuleysaneyso horyaalka Bishii Novermber ee 2019, kaddib markii Reds ay garaacday Manchester City.
Liverpool ayaa 3-1 waxa ay kaga adkaatay Man City ciyaar xiiso badan oo ka dhacday Anfield, Jose ayaana sheegay in natiijadaasi uu ku aaminay in horyaalka uu u galban doono Liverpool.
Jose Mourinho ayaa kaddib guushii ay ka gaareen xalay kooxda Manchester City wuxuu sheegay:
“Waxaan dareemanay in Liverpool ay horyaalka qaadi doonaan bilowgii November”.
“Waan ogahay in ay aad u adagtahay in markii 3-aad oo xiriir ah aad ku guuleysato horyaalka, way adag tahay, way adag tahay !
“Laakiin Man City ilaa iyo iminka waa koox cajiib ah, heysata macallin cajiib ah, iyo ciyaartoy cajiib ah.
“In aan garaacno iyaga waxay inoo tahay wax aad u wanaagsan oo dhinaca kala sareynta ah, marka aad 2 kulan qasaaro la kulanto waxaad aadeysaa heerka hoose, marka aad adkaatana 2 kulan waxaad qeyb ka noqoneysa halka sare, marka guushaas waxy inoo aheyd mid muhiim inoo ah .”
Guusha Spurs ay ka gaartay Man City ayaa ka dhigan in waqtigan ay soo galaan booska 5-aad ee kala sareynta horyaalka, xilli ay afar dhibcood oo nadiifa u jiraan Chelsea oo sabtidii bareejo 2-2 ah la gashay Leicester City.